मनास्लु हिमालको शिखर चुमेपछि…-Setoghar
एभरेष्ट बेसक्याम्प पुगेर फर्केलगत्तै मलाई मनाङतर्फको मनास्लु पदमार्गको भ्रमण गर्ने अवसर मिल्यो । चार दिनको भ्रमणले मलाई मनास्लु हिमालको आरोहण गर्ने उर्जा दिलायो । सोहीअनुरुप मैले योजना बुन्न थालेँ । मैले सोधेँ, ‘कति लाग्छ मनास्लु हिमाल चढ्नको लागि ?’ जवाफ आयो– ‘घटिमा पनि पाँच लाख ।’ एकातिर हिमाल आरोहणको भूत चढिसक्यो भने अर्कोतिर आर्थिक सङ्कट पनि उस्तै । एउटी केटी मान्छे । कसरी जुटाउने यतिका रकम ? मैले एउटा उखान सम्झेँ– तँ आँट म पुर्याउँछु ! सोहीअनुरुप नै मैले हिमाल चढिछाड्ने निधो पनि गरेँ । २–४ महिनाको योजना बुनाइपछि मैले मनास्लु अर्थात माउन्ट किलरको नामले विख्यात मनास्लु हिमालको आरोहणको तयारीमा लागेँ ।
चौथो दिन गोरखाको साम्दो, पाँचौँ दिन सामागाउँ र छैटौं दिनमा मनास्लु बेसक्याम्पमा बास पर्यो । मानव बस्ती जब सकियो तब मेरो मनमा एकखालको खुल्दुली पैदा हुन थाल्यो । अब के हुने हो । मसँगै गएका सहयोगी, पथप्रदर्शक र साथीहरुले हौसला दिँदै गए । बाटोमा म पहिलोपटक मनास्लु आरोहणका लागि आएको भन्दा सबैले मलाई हाँसोमा पनि उडाए । तर म आत्मविश्वासका साथ अघि बढेँ ।
बेसक्याम्पबाट मनास्लु हिमाल आरोहणका लागि जाने बाटो निकै असजिलो रहेछ । पर्यटकहरु २–३ दिनसम्म बेसक्याम्पबाट क्याम्प वान, टु, थ्रि र फोर सम्म पुगे बाटो बनाउने अनि अभ्यास गर्ने गर्दा रहेछन् । हामीले पनि त्यसै गर्यौँ । बेसक्याम्पको चार दिनको बसाई निकै आनन्दित भयो । चार हजार ६ सय मिटरको उचाईमा रहेको यो क्षेत्रमा अत्याधिक जाडो पनि । एकातिर जाडो अर्कोतिर कसरी हिमाल चढ्ने भन्ने चिन्ता । सबैको नजरमा म कमजोर पनि सावित भइसकेको थिएँ । म सँगै गएका पाँच महिलामध्ये हामी दुईजना नेपाली नै थियौँ । बाँकी तीनजना विदेशी महिला पनि थिए । यसका साथै गाइड र अन्य सहयोगी पनि थिए साथमा । उनीहरूको माया, सहयोग र साथले मलाई थप उर्जा मिल्यो ।
अन्ततः मैले सेप्टेम्बर १४ तारिखका दिन बिहान ७:३० बजे ८१६३ मिटर अग्लो मनास्लु हिमालको चुचुरोमा पाइला टेक्न सफल भएँ । चुचुरोमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा र मेरो बाजेको फोटो देखाएँ । मलाई संसार जितेको भान भयो । गर्व लाग्यो । खुशीको सीमा नै रहेन । सधैं मनास्लुको चुचुरोमै बसीरहुँ जस्तो लाग्यो मलाई । तर के गर्ने फर्किनैपर्यो ।